Iyo iPhone 7 ichave iine 21Mpx kamera, USB-C uye 3GB ye RAM | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 ichave iine 21Mpx kamera, USB-C uye 3GB ye RAM [Runyerekupe]
Chekutanga pane zvese, ndinoda kujekesa, pamusoro pekuita kudaro mumusoro wenyaya ino, kuti iyi ingori runyerekupe rwandakaverenga pa internet kubva kune ruzivo rwakatorwa paWeibo. Yakatsanangura izvi, uye nguva dzose zvinoenderana nerunyerekupe urwu, iyo iPhone 7 inosanganisira mukati mayo mukati shanduko dzese dzisingazobatanidzwe mukugadzirwa kwayo, kutanga ne 21Mpx kamera. Kana isu tikatora sezvisina basa kumwe kudonha kuchangobva kuitika, senge IZVI, iyo iPhone 7 4.7-inch kamera ichave yakakura kupfuura iyo yazvino modhi, uye nekuda kwechikonzero ichocho, isu tese tiri kutarisira kukura kukuru panguva ino.
Kune rimwe divi, iyo kamera yeiyo iPhone 7 Plus kana Pro yaizove nayo maviri 12Mpx lenzi, saka isu tinofanirwa kumirira kuti tione zvavanotiudza munaGunyana kuti tifunge pane imwe modhi kana imwe yacho. Zviripachena kuti iyo 7-inch iPhone 5.5 yaizopa sarudzo dzataisazove nadzo pane iyo 4.7-inch modhi, senge mukana wekutarisa mushure mekutora pikicha (chimwe chinhu icho HTC yakatoratidza kare kare) kana kuita 3D simulation. Chero zvazvingaitika uye zvinoenderana nerunyerekupe urwu, zvese zvishandiso zvichave nekamera iri nani pane iyo iPhone 6s.
1 Iyo iPhone 7 yaizoshandisa USB-C uye kwete Mheni
2 3GB ye RAM yeiyo Plus modhi
Iyo iPhone 7 yaizoshandisa USB-C uye kwete Mheni
Runyerekupe urwu rwunotiunzirawo mamwe maviri akanaka nhau, kutanga nekubatanidza kwayo: iyo inonyanya kukakavara inotarisirwa kuunza munaGunyana ichave kubviswa kweiyo 3.5mm headphone port. Zvese zvinoratidza kuti isu tichafanirwa kubatanidza mahedhifoni kune Mheni chiteshi kana kushandisa modhi yeBluetooth, asi runyerekupe urwu runovimbisa kuti Apple ingadai yasarudza kuita izvo zvakanyatsonakira munhu wese (kunze kweayo chete muhomwe) uye kushandisa muyero weiyo ramangwana: USB. -C iyo yatakatotanga kuona pane mamwe mafoni. Chiteshi ichi chaizoshandiswa zvakare kukurumidza kuchaja. Isu tinorangarira kuti iyo USB-C chiri chinongedzo chinonzi chakazvarirwa muCupertino (mamwe mashoko) pavaitsvaga kuti vagadzire Mheni uye iyo Apple yakamisikidza nekuipa iyo kune International Organisation for Standardization (ISO), saka kushandisa chinongedzo ichi paDevices kufamba kunozoitika munguva pfupi.
Nezve kuchengetwa, runyerekupe urwu runovimbisa kuti hongu, pachave nemhando ye32GB, imwe 128GB uye imwe 256GB, asi iyo iyo yekupinda modhi inoramba iri iyo 16GB. Ini pachangu, ndinofunga kuti hazvina kukodzera chaizvo kuti misiyano iri x4 kubva pa32GB uye kuti kucharamba kuine mukana we16GB, asi zvinhu zvevatorwa zvauya kwatiri zvichibva kuCupertino (senge bhatiri kesi ine hump, dhizaini iyo handina kumbobvira ndanzwisisa).
3GB ye RAM yeiyo Plus modhi
RAM ndangariro ingave imwe poindi yekukakavara, kugara pa2GB yeiyo iPhone 7 uye kukwira kumusoro 3GB pane iyo iPhone 7 Plus. Ichi chinhu icho mumwe muongorori akatokoshesa, uyo akapa sechikonzero chekuwedzera kwe RAM mune yakakura modhi kugadziriswa kwemifananidzo yakatorwa pamwe nekaviri kamera.
Semazuva ese, isu tichafanirwa kumirira kuti tione kana iyo iPhone 7 / Plus ichisanganisira chero echinhu chinovimbiswa nerunyerekupe urwu. Tichasiya kusahadzika pakati paGunyana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 ichave iine 21Mpx kamera, USB-C uye 3GB ye RAM [Runyerekupe]
Nekushambadzira kwese kwausingaise kunyange neiyo iPhone 7 ine 3Gb yegondohwe iwe uchave unokwanisa kuona kana kupindura pane imwe nhau mune ino blog.
Ini ndinofunga iyo USB mhando C ndiyo yaive mhinduro yekusunga kune chinodzoserwa chinobatanidza, uye ndinofungidzira kuti Apple icharega kushandisa zvinongedzo zvakagadzirwa navo, chimwe chinhu kutaura nguva dzese pandinoverenga chinyorwa nemurume uyu, ndakaverenga zvakawanda zvekufungidzira uye kunyengera, fan hombe ini ndinoenda uye muroti
Ricardo Barajas chinobata mufananidzo akadaro
Izvo zvinoita kunge zvisina kupenga kwandiri, kana munhu akafunga mutemo unobvumidzwa neEuropean Union, iyo inosungira makambani ese kushandisa charger yepasirese, uye inotanga kushanda senge yemwedzi uno.
Kana kungoitira Apple kuti uwane nzira yakatenderedza mutemo uyu.
Pindura Ricardo Barajas
Haiwa, kunyepa, ndomwedzi uno asi gore rinouya. Saka pamwe iyo inobuda neyakajairika yekubatanidza ndiyo iyo iPhone 7s.
Ini ndinofunga kuti apple harisi kuedza nesimba zvachose kubvira 2015 nharembozha dzatove neidzi maficha, ese ari 3gb e RAM uye 21mpx kamera, senge moto x chimiro kana yakachena edition (zvinoenderana nekuti zita riripi) uye mutengo wakaderera pane iPhone 6.
Ini ndinofunga kuti apuro haisi kuyedza zvakanyanya kubva 2015 nharembozha senge moto x yakachena edition kana masitayera (zvinoenderana nekuti uripi zita racho) inotova neese 3GB ye RAM uye 21mpx kamera uye chete U $ S300 nepo Iyo iPhone 6 iri paUS $ 600 iyo ine yakaderera mashandiro kupfuura moto x
Mark Gurman anotipa ruzivo pane zvatichaona paWWDC
Apple inoshandura kushambadzira kwezuva raamai nekubvisa vakaroora kana vakadzi